300 – 999 အေဒီ – 2ငါးကို
300 – 999 အေဒီ
မူလစာမျက်နှာ / Church ကို / ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အချိန်မျဉ်းတစ်ကြောင်း / 300 – 999 အေဒီ
300 - ရောမမွို့ရှိသူတော်စင် Marcellinus နှင့်ပေတရု၏ Catabomb အတွက်နံရံဆေးရေးပန်းချီကားများအသွေးလွန်နှင့်အတူထိုမိနျးမ၏ခရစ်တော်ရဲ့အနာရောဂါငြိမ်းစရာ၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဇာတ်လမ်းသရုပ်ဖော်
300 – 325 - ယူစီးဘီးယပ် Pamphilus, အသင်းတော်များ၏သမိုင်း
313 - မီလန်၏အမိန့်: ဧကရာဇျကွန်မဟာနှင့် Licinius ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားဝင်
325 - Nicaea ၏ကောင်စီ Arius ပြစ်တင်ရှုတ်ချ; ခရစ်တော်၏ Divinity ၏တရားသေအယူဝါဒအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်
327 - စိန့်ဟယ်လီနာ, ကွန်၏မိခင်, စစ်မှန်သောလက်ဝါးကပ်တိုင်ပြန်လည်သက်သာ
330 - ကွန်ဘိုင်ဇန်တီမှမြို့တော်လှုံ့ဆျော
336 - ခရစ်စမတ်၏ပထမဦးဆုံးပွဲ: ရောမမွို့၌ကျင်းပခရစ်တော်၏သူငယ်တော်ဖွားမြင်၏အဘို့ပှဲ, စနေဂြိုဟ်နတ်ဘုရားများ၏အယူမှားပွဲခံရာခရစ်ယာန်ဘာသာ marking
340 - စိန့် Athanasius လက်ဇန္ဒြီးယား၏ဘိရှော့ကိုသန့်ရှင်းစေ; အကြိမ်ကြိမ် Ariane ကဖြုတ်ချ
355 – 357 ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Liberius များ၏မြဲပေးနေတာ
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Liberius ဧကရာဇ် Constantius အားဖြင့်ပြန်ပေးဆွဲဖြစ်ပါတယ်, အဘယ်သူသည် Athanasius ရှုတ်ချတဲ့ကြေညာချက်လက်မှတ်ထိုးရန်သူ့ကိုတွန်းအားပေးရန်ကြိုးစားနဲ့ Ariane ထောက်ခံ. Liberius အစဉ်အဆက်အတွက် ပေး. ဖြစ်စေမမသိရသေးကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, သူအတင်းအကျပ်ခဲ့ကြပေသည်အဖြစ်ဒါပေမယ့်သူကိုပြုလျှင်ပင်ကပုပ်ရဟန်းမင်းမမှားယွင်းထိခိုက်ခဲ့ကြမည်မဟုတ်. သို့သော်ငြားလည်း, သူတစ်ဦးစိန့်အမည်ရှိသောခံရဖို့မပထမဦးဆုံးပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်.
366 - Athanasius လက်ဇန္ဒြီးယား၏ဘိရှော့အဖြစ်ပွနျလညျထူထောငျ
380 - ခရစ်ယာန်ဘာသာပြည်နယ်၏တရားဝင်ဘာသာဖြစ်လာပြီး
381 - Constantinople ၏ကောင်စီသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ Divinity ၏တရားသေအယူဝါဒအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်
382 - ရောမမြို့၏ကောင်စီပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးစိန့် Damasus ငါအောက်မှာကမျြးစာ၏ canon ကိုသတ်မှတ်ပါတယ်; ခုနစျပါး deuterocanonical စာအုပ်တွေလည်းပါဝင်သည် (နောက်ပိုင်းတွင်ပရိုအားဖြင့်ပယ်ချ)
382 – 406 - စိန့်ဂျရုမ်း Latin သို့ကမျြးစာကိုဘာသာပြန်ဆို
387 - မီလန်အတွက်စိန့် Ambrose အားဖြင့်ဗတ္တိဇံကိုစိန့်သြဂတ်စ
400 - မာရိ၏အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်၏ပွဲအရှေ့ကျင်းပဖြစ်ပါတယ်
407 - Saint John Chrysostom ပြည်ပရောက်ကွယ်လွန်
410 - Visigoths ရောမမြို့အိတ်
431 - ဧဖက်ကောင်စီ Nestorius ပြစ်တင်ရှုတ်ချ; မာရိ၏ဘုရားသခငျ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်၏တရားသေအယူဝါဒအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် (ပိတ်ဆို့မှုခေါင်းစဉ်က "ဘုရားသခငျ၏မိခင်"), ခရစ်တော်၏ Divinity အတည်ပြု
432 - အိုင်ယာလန်မှစိန့်ပက်ထရစ်၏မစ်ရှင်
451 - Chalcedon ၏ကောင်စီခရစ်တော်အတွက်နှစ်ဦးစုံလင်တဲ့သဘာဝတရား၏တရားသေအယူဝါဒအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် (ဘုရားသခင့နှင့်လူ့)
452 - ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးစိန့်လီယိုမဟာရောမမြို့ sacking မှ Attila ကိုဟွန် dissuades
476 - ရောမအင်ပါယာ၏ကျဆုံးခြင်း
495 - ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Gelasius စိန့်ငါအမိန့်တော်အားဖြင့်သမ္မာကျမ်းစာကို canon အတည်ပြု; deuterocanonical စာအုပ်တွေလည်းပါဝင်သည်
496 - အ Frank ဘုရင်ခလိုဗစ်၏ငါ၏ဗတ္တိဇံ
500 - ခရစ်တော် Pantocrator, ယေရှု၏အသက်အကြီးဆုံးလူသိများအိုင်ကွန်, သိနာတောင်ပေါ်မှာစိန့်ကက်သရင်း၏ကျောင်းတိုက်
525 - စိန့်ဘင်နီဒစ် Monte Cassino ထူထောင်ခြင်း
527 - ကျောက်ရုပ်တု Exiguus အသူငယ်တော်ဖွားမြင်မှအနှစ်ခန့်မှန်း, သတ်မှတ်ရေး Anno Domini သုံးပြီး (A.D.), "သခင်၏တစ်နှစ်တာ" အတွက်လက်တင်
529 - လိမ္မော်ရောင်၏ဒုတိယအကောင်စီ Semi-Pelagianism ကိုရှုံ့ချလိုက်ခြင်း, အကျင့်ကိုကျင့်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းအဘို့ဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်လိုအပ်ချက်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုရှငျး
536 – 555 - ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Vigilius ၏ဖြစ်ရပ်မှန်
အဆိုပါ Empress Theodora Vigilius bribes နှင့်သူ့ကို Monophysite ယူဖောက်ပြန်သူ၏ထောက်ခံမှုလဲလှယ်အတွက်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြ conspires. ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရအပေါ်သို့, သို့သော်, Vigilius အသင်းတော်များ၏ရှေးရိုးစွဲသှနျသငျဆန့်ကျင်သွားကြဖို့ငြင်းဆန်.
553 - Constantinople ၏ဒုတိယအကောင်စီ Chalcedon ၏အာဏာရအတည်ပြု
563 - Iona မှစိန့် Columba ၏မစ်ရှင်
596 - ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးစိန့်ဂရက်ဂိုရီမဟာ Anglo-Saxon ၏နာတရားဟောကြီးကြပ်, အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
598 - ဂရက်ဂိုရီမဟာယုဒလူတို့၏နှိပျစတားမြစ် (အက္ခရာများ)
614 - ပါရှန်းဘုရင် Chosroes သည်သန့်ရှင်းသောသင်္ချိုင်း၏ဘုရားကျောင်းကနေစစ်မှန်သောလက်ဝါးကပ်တိုင်ခိုးယူ, ယေရုရှလင်မြို့
622 - အစ္စလာမ်ဘာသာ၏ Start ကို, မိုဟာမက်အကောငျးကငျတဂါဗြေလကနေရူပါရုံကိုလက်ခံရရှိရန်ဆို
630 - ဧကရာဇ် Heraclius ယေရုရှလင်မြို့မှစစ်မှန်သောလက်ဝါးကပ်တိုင် restores
636 - ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံများစိန့် Isidore ကွယ်လွန်, အနောက်တိုင်းအဘတို့၏နောက်ဆုံး
637 - ယေရုရှလင်မြို့မူဆလင်သိမျးပိုကျ
642 - လက်ဇန္ဒြီးယား၏မွတ်စလင်သိမျးပိုကျ
680 – 681 - Constantinople ၏တတိယကောင်စီခရစ်တော်အတွက်နှစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသောအလိုတော်တရားသေအယူဝါဒအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် (ဘုရားသခင့နှင့်လူ့)
680 - ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Honorius ငါ၏ပြစ်တင်ရှုံ့ချခဲ့ကြပါသည်
Constantinople ၏တတိယကောင်စီ Honorius လည်းပါဝင်သည် (ဃ. 638) အယူမှားသူတစ်ဦးစာရင်းထဲတွင်. အဆိုပါပြစ်တင်ရှုံ့ချ, သော်လည်း, ယူဖောက်ပြန်၏သွန်သင်ချက်အဘို့မက, ဒါပေမယ့်ရှုတ်ချရန်ပျက်ကွက်မှုအတွက်. ထို့ကြောင့်, ပုပ်ရဟန်းမင်းမှားယှငျးနိုငျနဂိုအတိုင်းကျန်ရှိနေဆဲ. ကောင်စီပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးစိန့် Agatho မှစာတစ်စောင်ထဲမှာ, စိတျထဲမှာ Honorius နှင့်အတူ, ရောမမြို့အမှားသို့ပြိုလဲဘယ်တော့မှသိရသည်ခိုင်မာသွား. အဆိုပါကောင်စီစာကိုအတူသဘောတူ.
700 - Lanciano ၏ပှဲတျောအအံ့ဖွယ်
Mass ကာလအတွင်းသိသိသာသာအသွေးအသားထဲသို့မုန့်နှင့်စပျစ်ရည်ကိုအပြောင်းအလဲ. နောက်ပိုင်းမှာအတွက်သိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်မှု၌ထင်ရှား 1971 လူ့နှလုံးတစ်ရှူးနှင့်သွေးဖြစ်, အမျိုးအစား AB. ဤရွေ့ကား element တွေမပုပ်နိုင်သောအဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြ, သိပ္ပံပညာအန်တု.
711 - စပိန်၏မွတ်စလင်သိမျးပိုကျ
722 – 1492 - စပိန်၏ခရစ်ယာန် reconquest
726 - Iconoclasm: ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်း၏ကွောကျရှံ့သောအုပ်အရှေ့သန့်ရှင်းသောရုပ်တုဆင်းတု၏ဖျက်ဆီးခြင်း
731 - ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Gregory III ကို Iconoclasm ပြစ်တင်ရှုတ်ချ
731 - စိန့် Bede အသျှင်, အင်ျဂလိဘုရားကျောင်းနှင့်ပြည်သူ့သမိုင်း
749 - ဒမာသက်မြို့ Saint John ကွယ်လွန်, အရှေ့အဘတို့၏နောက်ဆုံး
754 - စိန့် Boniface ၏အာဇာနည်, ဂျာမဏီ၏တမန်တော်
787 - Nicaea ၏ဒုတိယအကောင်စီသန့်ရှင်းသောရုပ်တုဆင်းတု၏ကြည်ညိုလေးမြတ်ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်မိန့်
795 – 1014 - ဗိုက်ကင်းကာလ: အိုငျးရစျဘုန်းကြီးတွေမီးလောင်မှသမ္မာကျမ်းစာနှင့်အခြားစာအုပ်များကိုကယ်တင်, အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်
800 - Charlemagne သန့်ရှင်းသောဘုရားသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရာဇ်သရဖူကိုဆောင်း
806 - အာဇာနည်နေ့ '' ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်: Iona အပေါ်ဆောက်သွားတတ်ကြသည်အိတ်ကျောင်းတိုက်, အသက်ခြောက်ဆယ်ရှစ်သံဃာတော်များသတ်ဖြတ်
842 - Constantinople မှာ Synod သန့်ရှင်းသောရုပ်တုဆင်းတု restores နှင့်အျောသိုဒေါ၏ပွဲမိန့်
857 – 878 - Botian Schism
Photius စိန့် Ignatius deposes, Constantinople ၏ဘိုးဘေး. ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးစိန့်နစ်ကိုးလပ်စ Ignatius ၏မျက်နှာသာအတွက်မဟာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို. Photius အနောက်တိုင်းဘုရားကျောင်းပြစ်တင်ရှုတ်ချ.
863 - ထိုဟာဆလဗ်မှသူတော်စင်စိရယျလျနှင့် Methodius ၏မစ်ရှင်; Cyrillic အက္ခရာတီထွင်
869 - Constantinople ၏စတုတ္ထကောင်စီ Photius ပြစ်တင်ရှုတ်ချ
878 - ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန် VIII Ignatius ၏ပြီးနောက် Photius ၏အပ်တက်ဝန်ခံ, အ schism အဆုံးသတ်
909 - ဝီလျံကို Pius, Aquitaine ၏ Duke, Cluny ၏အသင်းတော်ထူထောင်ခြင်း, ဘုန်းတော်ကြီးသင်သက်တမ်းတိုး၏အလယ်ဗဟို
929 - စိန့် Wenceslaus ၏အာဇာနည်, ဘိုဟီးမီးယား၏ Duke
957 - ကိယက်ဗ်၏စိန့်မင်းသမီး Olga ၏ဗတ္တိဇံ, ရုရှားနိုင်ငံ
966 - Duke Mieszko ၏ဗတ္တိဇံပိုလန်၏ပြောင်းလဲခြင်းမှဦးဆောင်
980 - Gandersheim ၏ Roswitha, သီလရှင်နှင့် poetess, အစောဆုံးလူသိများအမျိုးသမီးပြဇာတ်ရေးဆရာ, မြောက်မြားစွာသောခရစ်ယာန်အကျင့်ကိုကျင့် composes
988 - ကိယက်ဗ်၏စိန့်မင်းသားဗလာဒီမာ၏ဗတ္တိဇံ, Olga ၏မြေးဖြစ်သူ, ရုရှားဘာသာပြောင်းမှဦးဆောင်
993 - ပထမဦးစွာရိုးရာဓလေ့ Canon; ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန် XV စိန့် Ulrich တို့ canonizes
စက်တင်ဘာလ 22, 2018
စက်တင်ဘာလ 21, 2018
စက်တင်ဘာလ 20, 2018
စက်တင်ဘာလ 19, 2018
စက်တင်ဘာလ 18, 2018